Debian / Ubuntu အခြေပြု distro ကိုမူလအနေအထားသို့ပြန်ထားရန်။ | Linux မှ
Debian / Ubuntu အခြေပြု distro ကိုမူလအနေအထားသို့မည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း
အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ များစွာသော package များကိုတပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ distros များကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျော်စရာအတွက်အသုံးပြုသူများ၊ တခါတရံတွင်များစွာသောအရာများတပ်ဆင်ထားသည့် operating system နှင့်ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်မပါ ၀ င်သော packages များနှင့်အကြိမ်များစွာတွေ့ရသည်။ ** သင်သည်ထိုအရာများကိုမည်သည့်အချိန်၌တပ်ဆင်ရမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ အလားတူစွာတခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်အစကတည်းကအစမှစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ distro ၏မူလအခြေအနေသို့ပြန်သွားလိုကြသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ Debian / Ubuntu ကို အခြေခံ၍ distro ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာ။
1 Resetter ဆိုတာဘာလဲ။
2 Resetter ထူးခြားချက်များ
3 Resetter ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ။
4 Debian အခြေပြု distro ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နည်း။
၎င်းသည် Python နှင့် pyqt တို့တွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Debian သို့မဟုတ် Ubuntu အခြေပြု distro ကိုမူလအခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေသည်၊ distro ပုံသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသော package ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ distro ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် tool သည်ဖြန့်ဝေမှုတစ်ခုချင်းစီ၏ update manifest ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုလက်ရှိတပ်ဆင်ထားသည့် package များနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ manifest နှင့်ကွဲပြားသော install လုပ်ထားသော package များကို uninstall လုပ်ပြီးနောင်တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီ tool ကသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကိုအောက်ပါ distros တွေနဲ့သဟဇာတကြောင်းပြောဆိုထားသည်,
Linux Mint 18.1 (ငါ့ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်)
Ubuntu ကို 17.04
Ubuntu ကို 16.10
Ubuntu ကို 16.04
Ubuntu ကို 14.04
မူလတန်း OS 0.4
Linux Deepin 15.4 (စငါ့ခိုးယူခဲ့တယ်)
မြင့်မားသောထောက်ခံမှုနှင့်အတော်လေးမြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုအဆင့်မြင့်နှင့်အတူပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် tool ကို။
သင်၏ distro ၏အခြေခံဗားရှင်းသို့ပြန်ယူပြီးပါကသင်တပ်ဆင်လိုသည့် application များစာရင်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
၎င်းသည်သင့်လက်ရှိ distro အခြေအနေကိုမိတ္တူတစ်ခုသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ နောင်တွင်သင်ကထိုမိတ္တူများ၏ application ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ပါဝါ PPA အယ်ဒီတာသည်သင်၏စနစ်အတွင်းရှိမည်သည့်အသုံးပြုသူအတွက်မဆို PPAS အားရပ်ဆိုင်းရန်၊ activate လုပ်ရန်နှင့်ဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။
အမျိုးမျိုးသော installation options များ။
လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျှောက်ပြန်လည်စတင် mode ကို။
အဟောင်းများကို kernels ဖယ်ရှားခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ။
Resetter ကို install လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံး version နှင့်သက်ဆိုင်သော .deb file ကို download လုပ်ရန်သာလိုအပ်ပါသည် ဒီမှာ။ ထို့နောက် .deb package ကိုပုံမှန်အတိုင်းထည့်ပါ။
အလားတူစွာ၊ Resetter ကိုမထည့်သွင်းမီအောက်ပါ Command ဖြင့် wget ဖြင့် add-apt-key package ကို download လုပ်ပါ wget -c http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/a/add-apt-key/add-apt-key_1.0-0.5_all.deb ပြီးလျှင်အောက်ပါ command ကို အသုံးပြု၍ gdebi နှင့်ထည့်ပါ sudo gdebi add-apt-key_1.0-0.5_all.deb
Debian အခြေပြု distro ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Debian / Ubuntu ကိုအခြေခံသော distro ကို Resetter ဖြင့်အလွယ်တကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ယူနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာကိုဖွင့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ distro နှင့်၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပြင် update manifest ကိုချက်ချင်းဖော်ပြသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် tool သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်ဖော်ပြပါအသေးစိတ်အလုပ်အချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုမည့်ရွေးချယ်မှုသုံးခုကိုပြသည်။
လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်ဖြေ - အဲဒါကသင့်ကို system ကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်မှာအထုပ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ install လုပ်မဲ့ applications တွေစာရင်းတခုကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။
အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ဖြေ။ ။ Debian / Ubuntu ကိုအခြေခံပြီး distro ကိုအလိုအလျောက်ပြန်ရရှိနိုင်တယ်။ စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းပြန်လုပ်ပေးတယ်၊ သုံးစွဲသူတွေ၊
စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်သတ်မှတ်ဖြေ - သူကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပေးတယ်။ အဲဒီမှာငါတို့ install လုပ်ချင်တဲ့ ppa၊ အသုံးပြုသူများနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုဖျက်ပစ်ရန်၊ ဟောင်းသော kernel များကိုဖယ်ထုတ်ရန်၊ အပလီကေးရှင်းများအကြားဖယ်ရှားပစ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် tool သည်ညွှန်ပြသည့်ရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
ဤကိရိယာဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စမ်းသပ်ခြင်းမပြုလုပ်မီထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုလိုသောရလဒ်များကိုသင်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအရံသိမ်းဆည်းခြင်းသည်လည်းအကြံပြုလိုပါသည်။
မှတ်သားရန်မှာဤအပလီကေးရှင်းမှပြုလုပ်သောအလိုအလျောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုရိုးရှင်းသော command များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Debian / Ubuntu အခြေပြု distro ကိုမူလအနေအထားသို့မည်သို့ပြန်ယူရမည်နည်း
Kacike Techotiba ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းဆိုးတာက Fedora အတွက်မဟုတ်ဘူး၊ ငါ Kubuntu နဲ့ Fedora ကြားကရွှေ့တယ်။ Ubuntu အတွက်မဟုတ်ဘဲအပြန်အလှန်အားဖြင့် Fedora အတွက်ကောင်းသောကိရိယာများကိုအကြိမ်များစွာရှာသည်။
Kacike Techotiba သို့ပြန်ပြောပါ
Juan Luque ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းမွန်သော tool တစ်ခု၊ သက်တမ်းရှည် GNU Linux ။
ထိုအခါငါဘယ်လိုကြည့်ဖို့က install လုပ်ပါလိမ့်မယ်
Juan Luque အားပြန်ပြောပါ
မပြည့်စုံသောအချက်အလက်များ၊ installation နည်းလမ်းသည် .deb မဟုတ်ပါ
တွေ့ရှိခဲ့သည့် deb ဖိုင်မှတစ်ဆင့်ထည့်သွင်းပါ ဒီမှာ.
Gdebi မှတဆင့် deb ဖိုင်များကိုထည့်သွင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ အထူးသဖြင့် deb ဖိုင်ထည့်သွင်းရန် graphical နည်းလမ်းမရှိသောမူလတန်း os များတွင်။
terminal ပေါ်တွင်ပြေးပါ sudo apt install gdebi.
- Linux deepin သည် ubuntu ကိုအခြေခံသည်မဟုတ်၊ debian ပေါ်တွင် မူတည်၍ အချို့ modules များသည်၎င်းတို့၏ repos တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်မရနိုင်ပါ။
Linux Deepin အသုံးပြုသူများအတွက်
Resetter ကိုမထည့်သွင်းမီ add-apt-key package ကို အသုံးပြု၍ ရယူပါ wget -c http://mirrors.kernel.org/ubuntu/pool/universe/a/add-apt-key/add-apt-key_1.0-0.5_all.deb နှင့်ထည့်သွင်းပါ sudo gdebi add-apt-key_1.0-0.5_all.deb
စိတ်မကောင်းပေမယ့်ဖြန့်ချိရာတွင် Debian-based distro တွင်ထည့်သွင်းရန် .deb ရှိသည်။
ငါတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ပြproblemနာတစ်ခု ... ငါ Elementary OS ကိုပြုပြင်ရန်ရှာဖွေနေငါဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်, ငါကို install လုပ်ထားတဲ့ PPA ကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်အဆုံး၌ငါမသုံးခဲ့ဘူး, ဒါကြောင့်ငါကသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်, ငါအမှားလုပ်။ ငါမဖြစ်သင့်သောအခြားအရာ, အချို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ငါ terminal မှပြန်လည်ပြုပြင်သည် (ပြworkedနာမရှိဘဲပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်) ထို့နောက် OS ကိုပြန်လည်စတင်သည်။ သို့သော် system ကို loading လုပ်သောအခါ logo မတည်တော့ပါ။ ကျိုးပဲ့နေသော package များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်မူလတန်း os များပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားခြင်း၊ မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပြီးသမျှအရာအားလုံးကိုအသုံးချခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းများအားမွမ်းမံခြင်း၊ distro နှင့် terminal မှပြန်လည်လည်ပတ်မှုစနစ်တွင်ပြproblemနာမရှိဟုထင်ရသည်၊ ပုံမှန်စနစ်ထဲသို့ပုံမှန် ၀ င်ရောက်ရန်ပြန်လည်စတင်သောအခါ၊ Elementary သည် interface ကိုစတင်မထားဘူး။ can စက်ရုံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ သို့မဟုတ်မူလ OS ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်လိုင်းအနည်းငယ်သာကျွန်ုပ်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းများကိုကျော်သွားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီတောင်းခံခဲ့သည် ... ?
မင်္ဂလာပါ Debian9တွင် resetter ကိုသုံးလို့ရပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၀ င်းဒိုးက Linux ကိုမင်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထဲလိုချင်လား။